1aviagem.com - Soso-kevitra, resadresaka, tantara notantarain'ny amboara voalohany
Ny tambajotra sosialinay
Costa Rica Ilay firenena nanao safidy tsara!
Costa Rica, ilay firenena nanapa-kevitra tsara! Ah! Costa Rica, ity firenena ity izay nahagaga ahy noho ny nandrasana tamiko tamin'ny diako voalohany! Ary inona no safidy tsara nataon'izy ireo? Lazaiko anao izao. Ahoana ny amin'ny dia mandritra ny Pandemie? Alohan'ny hiresahana an'i Costa Rica…
hamaky bebe kokoa Costa Rica Ilay firenena nanao safidy tsara!
United Kingdom, Tany misy dite 5 maraina ary toerana tsy tokony tara!
Androany isika dia hiresaka momba ny UK, ilay firenena fantatra amin'ny dite 5:00 hariva, ary aza tara! Tonga tany London avy tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Heathrow tamin'ny diako voalohany nankany UK, dia efa azo natao ny nahita zavatra tena tsara ho an'ny mpizahatany. Ny seranam-piaramanidina dia mifandray amin'ny metro. Ary aiza…
hamaky bebe kokoa United Kingdom, Tany misy dite 5 maraina ary toerana tsy tokony tara!
Belzika - firenena mety hamaky tantara an-tsary, na misotro labiera sy mihinana sôkôla
Androany isika dia hiresaka momba an'i Belzika, firenena izay miresaka komik, labiera ary sôkôla avokoa. Manantena aho fa hahafinaritra ny famakiana! Amin'ny farany dia hanana tsy ampoizina isika (ho an'ny Breziliana ihany, amin'izao fotoana izao). Antwerp - renivohitry ny diamondra Toerana tsara hahatongavana any Belzika. Raha azo atao dia atoroko ny lamasinina, satria efa tafiditra…
hamaky bebe kokoa Belzika - firenena mety hamaky tantara an-tsary, na misotro labiera sy mihinana sôkôla
Ohatrinona ny loka Nobel mendrika ny reninao? - Ny fianakavian'i Curie dia nanangana 2 farafaharatsiny - Polonina sy Frantsa
Amin'ity Fetin'ny Reny ity dia te hametraka fanontaniana aho: Firy ny loka Nobel mendrika ny reninao? Heveriko fa noho ny fanomezana antsika fiainana fiainana fotsiny dia efa mendrika ny iray izy, ny iray kosa tonga hanohana anay mandra-pahatsika hanana herimpo sy mandeha amin'ny tongotsika manokana. Eny, nanorina 2 farafahakeliny ny fianakavian'i Curie…
hamaky bebe kokoa Ohatrinona ny loka Nobel mendrika ny reninao? - Ny fianakavian'i Curie dia nanangana 2 farafaharatsiny - Polonina sy Frantsa
Maninona ireo orinasa Breziliana no tokony hanaraka ny foto-kevitra momba ny ESG - Tontolo iainana momba ny fitantanana ny tontolo iainana, ary ny fomba mahasoa azy rehetra.
Inona ny atao hoe ESG? Ny foto-kevitra ESG dia fifandanjana eo amin'ny tripod: tontolo iainana, sosialy ary ny fitantanana orinasa. Amin'ireto fanontaniana ireto dia azontsika atao ny manome ohatra ny amin'ny: tontolo iainana: ny fanontaniana momba ny tontolo iainana dia misy: fiovan'ny toetrandro, harena voajanahary, fandotoana, fako ary biodiversité. Ara-tsosialy: amin'ny fepetra ara-tsosialy dia azontsika atao ny manasongadina: ny renivola, ny tombontsoa ara-tsosialy,…
hamaky bebe kokoa Maninona ireo orinasa Breziliana no tokony hanaraka ny foto-kevitra momba ny ESG - Tontolo iainana momba ny fitantanana ny tontolo iainana, ary ny fomba mahasoa azy rehetra.
Fitsangatsanganana voalohany tany Aotrisy - Ilay firenena nanova an'izao tontolo izao - Wina
Manararaotra ny quarantine (noho ny COVID-19) hanavaozana ny bilaogy. Tadidio fa raha hivoaka ianao, dia manaova sarontava, raha afaka manao vaksiny ianao ary mankatoa ny lalàna mifehy ny fahasalamana. Rehefa avy nilaza an'izany isika, handeha hitsidika an'i Austria ve isika? Te hahafanta-javatra Ny zavatra voalohany tsy tokony ho adino dia ny any Alemana dia ny fiteny alemà no lehibe indrindra. Ajanony…
hamaky bebe kokoa Fitsangatsanganana voalohany tany Aotrisy - Ilay firenena nanova an'izao tontolo izao - Wina
Netherlands? Ny fari-pahaizana ambony sy ny fahasamihafana misy an'i Holland
Ary manararaotra ny quarantine, andao havaozina kely kokoa ity bilaogy ity. Hevitra tsara dia ny hijerena io rakitsary sary io. Ary avereno jerena izany, izay angamba "fitsangatsanganana amin'ny ho avy", ary ho an'ny tontolo ara-kolontsaina! Eny, anio isika dia hiresaka momba an'i Holland, ilay firenena izay mampianatra betsaka amin'ny lohahevitra rehetra. Holland dia…
hamaky bebe kokoa Netherlands? Ny fari-pahaizana ambony sy ny fahasamihafana misy an'i Holland
Fitsangatsanganana voalohany any Litoania - Vilnius - Mahita namana tsara
Inona no tena nahavariana ahy? Raha hihaona amin'ny namako avy any Belarus, izay bevohoka aza, dia niampita ny sisintany hahita ny namany Breziliana taloha ihany, zavatra iray tsy manam-paharoa izany. Ary mbola nitondra fanomezana be dia be izy! Pin sy carte postale avy any Minsk, ary saribakoly sasany avy any Belarus ho an'ny vintana. (Oh ary koa ny cookies…
hamaky bebe kokoa Fitsangatsanganana voalohany any Litoania - Vilnius - Mahita namana tsara
Fa maninona i Prague no iray amin'ireo toerana tsara indrindra handaniana Halloween? - Repoblika Tcheky
Fantatsika fa ny 31 Oktobra dia raisina ho Hallowen, na Halloween, fialantsasatra izay mbola tsy tafiditra amin'ny fomba ofisialy amin'ny kalandrie Breziliana, fa ankalazaina amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao. Eto Brezila dia manana ny faha-02 Novambra isika, fialantsasatra ary andron'ny maty. Fa maninona no Repoblika Tseky…
hamaky bebe kokoa Fa maninona i Prague no iray amin'ireo toerana tsara indrindra handaniana Halloween? - Repoblika Tcheky
Inona no ampianarin'ny Mayans sy Aztec antsika momba ny areti-mifindra? - Mexico
Ny Maya ary ny Azteka, na dia efa an-jato taona maro aza, dia mbola mampianatra antsika betsaka! Raha mijery tantara bebe kokoa isika dia afaka mianatra ary tsy mamerina ny lesoka sasany. Efa mba nanontany tena ve ianao hoe maninona ny eropeana no manjaka an'i Amerika fa tsy ny mifanohitra amin'izay? Raha mamaly ity fanontaniana ity ianao dia milaza fa noho ny…
hamaky bebe kokoa Inona no ampianarin'ny Mayans sy Aztec antsika momba ny areti-mifindra? - Mexico
Fa maninona no milay be ny tanin'i Santa? - Failandy - Helsinki
Fantatro fa mbola misy kely alohan'ny Krismasy, saingy nahatsapa aho fa nanoratra momba ny tanin'i Santa Claus ary maninona raha miresaka momba ny diako voalohany tany? Ka andao hiresaka kely momba ny Failandy, ity olona mahomby sy manohana ity. Ahoana no nahatongavako tany Failandy? Ny voalohany…
hamaky bebe kokoa Fa maninona no milay be ny tanin'i Santa? - Failandy - Helsinki
Ahoana ny fomba manidina miaraka amin'ny Qatar Airways, ary ny seranam-piaramanidina Doha.
Ahoana ny fomba manidina miaraka amin'ny Qatar Airways? Fantatrao ve izany fanararaotana miseho amin'ny fiainanao izany ary tsy azo averina intsony? Marina izany, ity no diako voalohany niaraka tamin'ny Qatar Airways. Efa vonona ho an'i Azia ny script, saingy noho ny force majeure dia tsy afaka namita ny habakabaka, izay…
hamaky bebe kokoa Ahoana ny fomba manidina miaraka amin'ny Qatar Airways, ary ny seranam-piaramanidina Doha.
Orogoay firenena hafa tsy mitovy amin'i Amerika atsimo. - Montevideo
Manararaotra ny fotoana malalaka amin'ity quarantine ity dia nanapa-kevitra ny hijery sary avy amin'ny dia taloha aho… Nahamarika aho fa manana fitaovana bebe kokoa hanavao ny bilaogy noho izay noheveriko. Ka anio aho dia hiresaka kely momba an'i Orogoay. Firenena iray izay tena tsy mitovy amin'i Amerika atsimo, ary nahoana? Noho ny politikam-bahoaka. In ...
hamaky bebe kokoa Orogoay firenena hafa tsy mitovy amin'i Amerika atsimo. - Montevideo
Resadresaka ifanaovana amin'ny Breziliana, manao ahoana ny fanandramana fifanakalozana? - Firenze - Italia
Manao ahoana ny traikefan'ny Exchange? Androany izahay dia hitondray anao kely hoe inona ny traikefa amin'ny fianarana any ivelany. Mba hanaovana izany dia miankina amin'ny fanampian'i Thereza aho. Nihaona izahay rehefa tonga tany Brasilia nankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan ny rahavaviny. Nandray anjara tamin'ny fandaharana "Siansa tsy misy fetra" izy ary nahavita be…
hamaky bebe kokoa Resadresaka ifanaovana amin'ny Breziliana, manao ahoana ny fanandramana fifanakalozana? - Firenze - Italia
Ny ideolojia ankavia, fa maninona no tsy afaka mamaritra ny lafiny misy anao?
Tato ho ato tany Brezila dia be ny resaka momba ny ady ideolojika, eo amin'ny olona izay mieritreritra amin'ny fomba "mahitsy kokoa" amin'ireo olona mieritreritra hoe "ankavia kokoa". Fantatrao ve anefa ny dikan'ireo teny ireo? Alohan'ny hanombohantsika dia andao jerena hoe avy aiza ireo teny ireo. Ny niandohan'ny havia sy havanana.…
hamaky bebe kokoa Ny ideolojia ankavia, fa maninona no tsy afaka mamaritra ny lafiny misy anao?
Mendrika izany ve ny fiantsenana any Ciudad Del Este? - Paragoay
Eny ry zalahy, satria any amin'ny quarantine isika dia nanapa-kevitra ny hijery ireo sary taloha ary teo afovoany dia nahita ny sasany tamin'ny dia voalohany nataoko tany Paraguay. Ary nieritreritra aho: Wow, miresaka kely momba an'i Paraguay ry zareo, maninona aho no tsy miresaka kely momba izany? Ary ity ny vokany. Aiza? Paraguay dia any Amerika atsimo ...
hamaky bebe kokoa Mendrika izany ve ny fiantsenana any Ciudad Del Este? - Paragoay
Fipoahana - Brasilia - Brezila
Miisa 10.114 no maty tamin'ny 09/05/2020 (ary miakatra), ireo dia noho ny COVID-19 ihany. Niakatra ampy ve ny fiolahana niharam-boina ho an'ireo izay te-hahita ny tampon'ilay fiolahana? Ahoana no hanavotanao ny toekarena amin'ireo mpiasa maty? Ahoana ny fomba hisarihanao ireo mpampiasa vola vahiny raha te hampifandraisina amin'ny fahafatesana ny sarin'izy ireo? Izy ireo ...
hamaky bebe kokoa Fipoahana - Brasilia - Brezila
Dia lavitra mandritra ny 3 andro mankany Bariloche - Arzantina
Fitsangatsanganana 3 andro ho an'i Bariloche - Arzantina Ary amin'izao fotoan'ny quarantine izao dia tsy misy tsara noho ny maka rakikira taloha sy mijery ireo sary. Izay nitondra ahy niverina tany amin'ny diako voalohany tany Bariloche, izay any Arzantina. 3 andro monja no nijanonako tao an-tanàna, ary nahavita niantsona gara roa aho. Masoandro sy oram-panala. SY ...
hamaky bebe kokoa Dia lavitra mandritra ny 3 andro mankany Bariloche - Arzantina
Ny Mayans sy ny vinavinan'ny fiafaran'izao tontolo izao - Mexico
Inona no azon'ny Mayana ampianarina antsika momba ny faran'izao tontolo izao? Fotoana vitsy lasa izay, tamin'ny 2012, olona maro no nandre momba ny faran'izao tontolo izao. Ary mistika be no nipoitra nanodidina ny sivilizasiôna Maya. Rehefa dinihina tokoa, tsaho milaza fa araka ny kalandrie Maya, izao tontolo izao dia hifarana…
hamaky bebe kokoa Ny Mayans sy ny vinavinan'ny fiafaran'izao tontolo izao - Mexico
Pilanesberg Park - lesona safari sy biby - Afrika atsimo
Salama ry zalahy, ity lahatsoratra ity dia ho fampifangaroana torohevitra sy fitondrantena momba ny biby nianarana nandritra ny diako voalohany tany Afrika atsimo.Torohevitra momba ny Valan-javaboary Kruger Ny ankamaroan'ny olona mieritreritra ny ho any Afrika Atsimo, na izay efa teo dia mieritreritra hanao safari fiara lalao sary. NY ...
hamaky bebe kokoa Pilanesberg Park - lesona safari sy biby - Afrika atsimo
Nanadihady vehivavy vehivavy meksikanina izahay ary nitondra Coronavirus fangatahana sy toro-hevitra momba an'i Mexico
Nanadinadina vehivavy Meksikana iray izahay ary nitondra Torohevitra momba ny Virus Corona sy ny toro-hevitra momba an'i Mexico! Nihaona tamin'i Érika aho nandritra ny sakafo hariva tany Rio de Janeiro. Ary niditra tao amin'ny vondrona mpizahatany izahay ary nizara latabatra iray ihany izahay. Liana te hahafanta-javatra i Érika momba ny fari-piainanay teo amin'ny latabatra. Nisy olona ...
hamaky bebe kokoa Nanadihady vehivavy vehivavy meksikanina izahay ary nitondra Coronavirus fangatahana sy toro-hevitra momba an'i Mexico
Ahoana no ahafahana manana fitateram-bahoaka maimaim-poana? - Estonia - Tallinn
Tamin'ny dianay voalohany tany Tallinn, renivohitr'i Estonia, rehefa tonga teo amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena dia gaga tamin'ny seranam-piaramanidina tsy mahazatra. Raha ny tena izy dia toy ny ahoana ny nanamboarana azy mba ho iray amin'ireo seranam-piaramanidina mahafinaritra sy mahafinaritra indrindra. Niaiky aho fa nandritra ny diako dia toa vitsy ny seranam-piara-manidina…
hamaky bebe kokoa Ahoana no ahafahana manana fitateram-bahoaka maimaim-poana? - Estonia - Tallinn
Manintona an'i Gaborone - Botsoana
Inona no hatao any Gaborone - Botsoana Tamin'ny diako voalohany tany Afrika dia nanapa-kevitra ny hiampita ny sisintany manelanelana an'i Afrika Atsimo sy Botswana aho. Rehefa dinihina tokoa, Brezila dia somary lavitra ny kontinanta afrikanina. Ka toa tsara raha hiampita ny sisintany ary hijery raha toa ny Botswana…
hamaky bebe kokoa Manintona an'i Gaborone - Botsoana
Ahoana no ahafahantsika mandresy ny ady lehibe fahatelo? Mety ho eo ny valiny.
Ahoana ny fomba handresena ny Ady Lehibe Faharoa miaraka amin'ny andianà mpizahatany?
hamaky bebe kokoa Ahoana no ahafahantsika mandresy ny ady lehibe fahatelo? Mety ho eo ny valiny.
Afrika atsimo.fadinadinana miaraka amina afrikana atsimo. Ary tsy nisy fiovana tsy ampoizina teo afovoan'ny tafatafa.
Alohan'ny hanombohako dia tsy maintsy milaza aho fa natao an-tànana tanteraka ity resadresaka ity. Tsy nanam-potoana hieritreretana script izahay ary tamin'ny finiavana ihany no nanatanterahana azy. Araka ny soso-kevitr'i Lexiegh manokana. Te hanana zavatra tena izy izy! Ny fomba tsara indrindra hanatanterahana izany dia ny fanaovana azy toy izao, amin'ny fampiasana telefaona finday hanoratana ary…
hamaky bebe kokoa Afrika atsimo.fadinadinana miaraka amina afrikana atsimo. Ary tsy nisy fiovana tsy ampoizina teo afovoan'ny tafatafa.
Efa nisy ve ny Knights Templar?
Tantara lehibe avy any amin'ny kaontinanta taloha.
hamaky bebe kokoa Efa nisy ve ny Knights Templar?
Inona no hitsidika an'i Riga? Ilay tanàna manambatra ny maritrano vaovao sy taloha - Letonia
Eny, alohan'ny hiresahako momba an'i Riga mihitsy, naninona aho no tonga tany? Amin'ny faniriana hitsidika ny firenena rehetra eto an-tany, na farafaharatsiny ny ankamaroan'izy ireo, dia teo afovoan'ny làlana i Latvia, ary teo afovoan'ny làlana dia i Letonia. Eo anelanelan'i Estonia sy Litoania. My Gaga aho fa nandalo ny…
hamaky bebe kokoa Inona no hitsidika an'i Riga? Ilay tanàna manambatra ny maritrano vaovao sy taloha - Letonia
1- Fa maninona aho no manoro ny Banco Inter? Raha mila kaonty fanamarinana Breziliana ianao amin'ny antony rehetra, na noho ianao mipetraka eto Brezila, na noho ny asa, na ny mianatra, na noho ny fizahan-tany, na mandefa na mahazo vola alefa avy any ivelany mankany soso-kevitra dia ny hoe…
hamaky bebe kokoa Inter Bank
Luxembourg - ny Grand Duchy eto amin'izao tontolo izao
Luxembourg dia firenena kely any Eropa, manodidina an'i Frantsa, Belzika ary Alemana. Ary maninona no mendrika hitsidika azy io? Satria izy no Grand Duchy farany eto an-tany. Ary angamba manontany tena ianao hoe: ary inona ny Grand Duchy? Valiny tsotra: firenena, izay raha tokony ho filoha voafidy, dia manana printsy lehibe iray izay…
hamaky bebe kokoa Luxembourg - ny Grand Duchy eto amin'izao tontolo izao
Araka ny nampanantenaina tamin'ny lahatsoratra farany, hiresaka momba ny kaontinanta fahavalo aho. Ary aiza ny kaontinanta fahavalo? Mijanona eo ambonin'ny lohantsika izany. Eny amin'ny habakabaka, amin'ny Earth Orbit! Amin'ny fikarohana ny sary zanabolana hahafantarana ny haben'ny afo ao Brezila amin'ny ankapobeny. Izany hoe, ao anatin'izany ny biomine 6 lehibe Breziliana ...
hamaky bebe kokoa Kaontinanta valo
Ahoana raha lazaiko aminao fa amin'ny tenantsika (olombelona) dia nahazo kaontinanta fahafito ny tany? Eny, tsara ny vaovao, saingy indrisy fa tsy izany. Noho ny fako miangona ao amin'ny ranomasimbe izay entin'ny onjan-dranomasina ary mifantoka amin'ny teboka iray ao amin'ny Ranomasimbe Pasifika eo anelanelan'i California sy Hawaii ...
hamaky bebe kokoa Kaontinanta fahafito
Torohevitra momba izay tokony hatao any Barcelona
Barcelona dia tsara ho an'ireo izay tia maritrano tsy mahazatra. Ny maso sy ny afovoan'ireo toerana fizahan-tany voatanisa etsy ambany dia tena mitondra miavaka sy ivelan'ny kianja ho an'ny mpitsidika. Raha ity no dia voalohany mankany Barcelona dia araho ireto torohevitra ireto: 1- Fiteny: Ny zavatra voalohany ho hitanao ...
hamaky bebe kokoa Torohevitra momba izay tokony hatao any Barcelona
Voninahitra ho an'i Notre-Dame
Tsy haiko hoe ahoana no hanombohana an'ity lahatsoratra ity, ka holazaiko anao ny heviny. Manome voninahitra ny Katedraly Notre-Dame, izay nodorana tamin'ny 15 aprily 04. Izy io dia zavatra nampihetsi-po olona maro, ankoatry ny savorovoro sy alahelo entin'ny zava-misy. Ho ahy izay nandeha nankany Frantsa niaraka tamin'ny namako ary…
hamaky bebe kokoa Voninahitra ho an'i Notre-Dame
Ahoana ny fandehanana any Paris?
Araka ny nampanantenaina tamin'ny lahatsoratra teo aloha, amin'ny fotoana manaraka hiresahako momba an'i Paris dia hitondra torohevitra vitsivitsy ho anao aho. (Ny lahatsoratra anaovako ity fampanantenako ity dia ity) Avy eo dia tonga ny fotoana hitandremana ny fampanantenanao. Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mamaritra ny fiantombohana ...
hamaky bebe kokoa Ahoana ny fandehanana any Paris?
Tsy azo atao ve ny mampiasa kafeinika sy kôkainina?
Tamin'ny lahatsoratra teo aloha dia nanao resadresaka nifanaovana tamina vehivavy Peroviana iray sy mpizahatany Breziliana momba an'i Peroa izahay. (Azonao atao ny miditra amin'ity tafatafa tsara ity amin'ny fikitihana eto). Noho ny aminy dia nanapa-kevitra ny hitondra fahalinana momba ny dite coca peroviana aho. Tea coa Ny fahalianana voalohany dia ny coca tea no entina any ...
hamaky bebe kokoa Tsy azo atao ve ny mampiasa kafeinika sy kôkainina?
Nahoana ny Frantsay no manaloka ny orony rehefa miteny anglisy ianao ary inona no tokony hataon'ireo Breziliana?
Androany dia hiresaka momba ny fiteny isika ary maninona ny frantsay no mikentrona ny orony rehefa miteny Anglisy amin'izy ireo isika. Saika ny olona rehetra niresahako momba an'i Frantsa sy izay efa teo dia nilaza zavatra roa foana: Misy toerana mahafinaritra sy mahafinaritra. Ary ny frantsay dia miketrona ny orony raha ...
hamaky bebe kokoa Nahoana ny Frantsay no manaloka ny orony rehefa miteny anglisy ianao ary inona no tokony hataon'ireo Breziliana?
Ampidiro ny mailakao hisoratra anarana amin'ity bilaogy ity ary hahazo fanontana vaovao.
ny Pro Design Design
Ho an'ireo izay te-hahafantatra raha mety ny ray aman-dreniny, eny izy ireo! :)
Io flick io fa ny matihanina ihany no mahay manao... Fa tsy androany, tsy androany... Hahaha misaotra @alexshima001
@stellarcs dia nahatohitra ny tsindry ary nahavita niala tamin'izany.
Miaraha 240 mpanjifa hafa